बीउ मासिएपछि आयो प्रविधि ! Yes Khabar | Nepali News from Nepal | Recent News
बीउ मासिएपछि आयो प्रविधि !
विराटनगर, माघ २३ गते । जुट उत्पादन घट्दै गएपछि प्रशोधनका क्रममा किसानले लिनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने प्रविधि भित्रिएको छ । उत्पादित जुटको सन्ठीबाट रेसा छुट्याउने प्रविधि नेपालमै पहिलो पटक भित्रिएको हो । जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रम इटहरीले ‘जुट पिलिङ मेसिन’ भित्र्याएको छ । जुट खेती अध्ययन गर्ने एक मात्र निकायका रूपमा यस कार्यालयलाई मानिन्छ ।
आवश्यकता महसुस गरेर लामो अनुसन्धानपछि एकथान मेसिन भित्र्याइएको जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक प्रा. डा. गोविन्दप्रसाद तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो । जुटको सन्ठीबाट रेसालाई छुट्याउने मेसिन भित्रिएसँगै किसानलाई खेतीमा आकर्षण गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ । सन्ठीलाई टुक्राएर रेसा अलग गर्ने काम पिलिङ मेसिनले गरेपछि सानो पोखरीमा रेसालाई डुबाएर दस दिनसम्म राखेपछि कच्चा जुट तयार हुने दाबी गरिएको छ ।
सन्ठीसँगै पानीमा राखेर रेसालाई अलग गर्नुपर्ने काम किसानका लागि सबैभन्दा बढी जटिल र समस्या बन्ने गरेको थियो । जुट खेती गर्दै आउनुभएका गडी गाउँपालिका सुनसरीका किसान रामछेदीलाल माझीले मेसिन उपलब्धताका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उत्पादन बढाउन जुट प्रशोधनका लागि भित्रिएको प्रविधिलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विशेष चासोका रूपमा लिइएको अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक तिम्सिनाको भनाइ छ । प्रविधिलाई किसानको पहुँचसम्म पु¥याउन सके खेतीप्रति आकर्षण बढाउन सक्नेछ ।
जुट प्रशोधन मेसिनको मूल्य पाँच लाख ५० हजार रुपियाँ परेको छ । चिनियाँ कम्पनीको यस मेसिनलाई परीक्षणका रूपमा प्रयोग सफल भएकोले आवश्यकता र माग अनुसार थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाएको र कृषि मजदुरको अभावले जुट बाली क्रमशः घट्दो अवस्थामा छ । नेपालमै सबैभन्दा बढी जुट उत्पादन हुने मोरङ, सुनसरी र झापाका खेत जुटविहीन अवस्थामा पुगेका छन् ।
चार दशक पहिले मोरङमा मात्रै ५५ हजारभन्दा बढी हेक्टरमा जुटको खेती हुने गरेको थियो । त्यसको क्षेत्रफल क्रमशः घटेर छ हजार हेक्टरमा झरेपछि प्रविधि भित्रिएको छ । प्रविधि भित्र्याएसँगै हामीले जुट खेतीको अवस्था अध्ययन गरिरहेका छौँ, कार्यक्रम संयोजक तिम्सिनाले भन्नुभयो, खेती गर्नका लागि किसानलाई आकर्षित गर्ने लगानी योजनाको मागसमेत गरिरहेका छौँ । प्रविधि भित्रिएसँगै चैत महिनामा जुट लगाउनका लागि जुट अनुसन्धान कार्यक्रम इटहरीले बीउ वितरण थालेको छ ।
सागका लागि तिता पटुवाको बीउ मात्रै माग्ने किसानले अहिले तोसा पटुवाको बीउ माग्ने क्रम बढेको छ । फाइबर जुट खेतीको उत्पादन बढाउन सक्दा निर्यात व्यापार बढ्ने र व्यापार घाटा कम गर्न सहयोगी बन्नेछ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरभित्र सञ्चालित जुट उद्योगका लागि वार्षिक ९० हजार मेट्रिक टन कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्दछ । आवश्यक जुटको १५ प्रतिशत १६ हजार मेट्रिक टन मात्रै नेपाली उत्पादन रहेको तिम्सिनाको भनाइ छ ।
नेपाली उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जुट उत्पादन गर्न ५५ हजार मेट्रिक टन बीउ किसानसम्म पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । खेतीप्रति किसानलाई आकर्षित गरेर चैतमा बाली लगाउने अवस्था सिर्जना गर्नसके साउनमा उकासेर धान रोप्न मिल्छ । अनुसन्धान केन्द्रले यो सिजनका लागि पाँच मेट्रिक टन बीउ वितरण गरिसकेको छ ।
अनुदानको बीउ प्रतिकेजी १५० रुपियाँमा किसानलाई उपलब्ध गरिएको हो तर भारतबाट आयात गरेर बिक्री गरिने बीउ भने प्रतिकेजी चार सय रुपियाँ पर्दछ ।